မှတ်ချက်စာအုပ် | November 2019
အဘယ်ကြောင့် Laptop ကိုဘက်ထရီစွဲချက်တင်မရနိုင်မလဲ? ငါသညျဤအမှု၌ဘက်ထရီနှငျ့အဘယျသို့ပွုသငျ့သညျ ...
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဘက်ထရီ (ကမိုဘိုင်း device ကိုစိတ်ကူးဖို့မတွေးဝံ့စရာဖြစ်ပါတယ်မပါဘဲ) လုံးဝတိုင်းလက်တော့ရှိပါတယ်။ နှင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်တဲ့ laptop ကိုကြိုက်နှစ်သက်လျက်, ဝင်းမှိတ်ပေါ်မှာရှိသမျှအယ်လ်အီးဒီ, နဲ့ Windows ဘယ်သူမျှမဝေဖန်မှားယွင်းမှုများကဤကိစ္စများတွင်ပါက Windows ကအသိအမှတျမစေခြင်းငှါထိုနညျးတူဖြစ်ပါသည်, လမျးဖွငျ့ (ပြသကြသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်: ဒါဟာတခါတရံကြောင့် charging ရပ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ဖြစ်ပျက် ဘက်ထရီသို့မဟုတ် "ဘက်ထရီကိုပလပ်ပေမယ့်အားသွင်းမထားဘူး" အဲဒီသတင်းပို့) ... ဒီဆောင်းပါးမှာပါ, ဒီဖြစ်ပျက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကဤအမှု၌လုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့။
အဆိုပါ Laptop ကိုသူ့ဟာသူအလိုအလျောက် Screen Brightness ကိုပြောင်းလဲ
နေ့သည်ကောင်းသော! မကြာသေးမီကပြဿနာများ၏အတော်လေးတွေအများကြီးကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်၏အရောင်အဝါလာပြီ။ အထူးသဖြင့်, က (သူတို့အသုံးပြုသူတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်တတ်နိုင်ထက်ပိုအထူးသဖြင့်ကတည်းကမကြာသေးမီနှစ်များတွင်အလွန်ရေပန်းစား) IntelHD ဘက်ပေါင်းစုံဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူမှတ်စုစာအုပ်စိုးရိမ်။ - အလင်းတိုးမိုက်မဲရရှိသွားတဲ့သောအခါ - အရောင်လျှောက်လျော့နည်းချိန်မှာလက်ပ်တော့အလင်းပေါ်ရှိပုံ: ဤကဲ့သို့သောပြဿနာများ၏အနှစ်သာရ။
အဘယ်မှာရှိယာဉ်မောင်း Asus ကမှတ်စုစာအုပ်ကို download လုပ်ပါ, သူတို့ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လို
ယခင်ညွှန်ကြားချက်၌ငါလက်တော့ပေါ်မှယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်ကို ပေး. , ဒါပေမယ့်ခဲ့အဓိကအားဖြင့်ယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တူညီသောအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အမည်ရဘယ်နေရာမှာသူတို့ပိုကောင်းတဲ့ကို set up နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပြဿနာများသည်ဤလုပ်ရပ်များနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြ၏သောအရာကိုနိုင်ရန်အတွက်ယာဉ်မောင်းကို download လုပ်ပါရန်, Asus ကမှတ်စုစာအုပ်မှလေးစားမှုနှင့်အတူလည်းရှိပါသည်။
သင်အေး Laptop ကိုမြန်နှုန်းမြင့်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရသောအခါ, ထိုအလုပ်မသက်မသာဖြစ်လာနိုင်အောင်ကဆူညံသံစေသည်ဤအကြောင်းကြောင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျနေတယ်ဆိုရင်, ဒီကို manual ထဲမှာကျနော်တို့ကဆူညံသံအဆင့်ကိုလျှော့ချဖို့ဘာလုပ်ရမှန်းစဉ်းစားရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, မတိုင်မှီသကဲ့သို့, laptop ကိုအနိုင်နိုင်ကွားနိုငျဖြစ်ခဲ့သည်။
မည်သို့ Wi-Fi ကွန်ရက်ရန်သင့် Laptop ကိုချိတ်ဆက်ဖို့။ laptop ကိုအပေါ်အဘယ်ကြောင့်နိုင်မရက Wi-Fi ကို access ကို
ကောင်းသောနာရီ။ ယနေ့က Wi-Fi ကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံး (အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူပင်ပံ့ပိုးပေးသင်သာ 1 စာရေးကိရိယာကို PC နဲ့ချိတ်ဆက်လျှင်ပင်, Wi-Fi ကို router ကိုထားနီးပါးအမြဲဖြစ်ပါသည်) ရှိပြီးသောတိုက်ခန်းအတွက်လက်တွေ့ကျကျဖြစ်ပါတယ်။ လက်ပ်တော့မှာအလုပ်လုပ်ရသောအခါငါ၏အလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ, ကွန်ယက်အသုံးပြုသူများနှင့်အသုံးအများဆုံးပြဿနာ - က Wi-Fi ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အကောင်းဆုံး Laptop ကို 2013 ခုနှစ်
အကောင်းဆုံးကို Laptop ကိုရွေးချယ်ခြင်းမော်ဒယ်များ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များကျယ်ပြန့်မျိုးစုံ၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုပေးအတော်လေးစိတ်ပျက်အားလျော့ဖွယ်တာဝန်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၌ငါ, 2013 ခုနှစ်မှတ်စုစာအုပ်အမျိုးမျိုးများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးတွေအကြောင်းသင်အခုဝယ်နိုင်သောပန်းတိုင်များကိုပြောပြရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကိရိယာ hit စာရင်း, လက်ပ်တော့၏စျေးနှုန်းနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များအတွက်စာရင်းပါလိမ့်မည်သောစံ။
နှစ်ခုဂရပ်ဖစ်ကတ်များ AORUS X7 နှင့်အတူထူးအိမ်သင်နဲ့အလင်းဂိမ်းမှတ်စုစာအုပ်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်မအလွန်, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွယ်ကူပြီးပါးလွှာဂိမ်းမှတ်စုစာအုပ် Razer Blade ကိုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့၏။ 2014 ယနေ့နှစ်သစ်, ဖြစ်ကောင်းအချို့သောနည်းလမ်းများအတွက် ပို. ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း။ ငါမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံ chip ကိုနှင့် discrete ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ထက်, စိတ်နှစ်ခု Nvidia GeForce GTX 765M အတွက်ခဲ့နှစ်ခုဂရပ်ဖစ်ကဒ်များအကြောင်းရေးသားခဲ့သည်အခါလမ်းက။
(HDMI cable ကိုအားဖြင့်) ကိုလက်တော့ / PC ကိုမှဒုတိယမော်နီတာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
မင်္ဂလာပါ ငါသည်သင်တို့ကိုများစွာသောသိကြပြီးလက်တော့ (ကွန်ပျူတာ), သင်တစ်စက္ကန့်မော်နီတာ (တီဗီ) နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သောစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီထင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စာရင်းကိုင်, ဘဏ္ဍာရေး, ပရိုဂရမ်, etc နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်, တကဥပမာမော်နီတာ, traslyatsii ဂိမ်း (ရုပ်ရှင်), နှင့်တိတ်တဆိတ်အလုပ်လုပ်ဖို့ဒုတိယ :) ထည့်သွင်းရန်အဆင်ပြေ .. : ထိုအခါဒုတိယမော်နီတာမရှိဘဲအချို့ကိစ္စများတွင်အပြည့်အဝအလုပ်မလုပ်လို့မရပါဘူး
HP က Laptop ကို (+ BIOS ကို setup ကို) ရက်နေ့တွင် Windows ကိုပြန်လည်
ကောင်းသောအားလုံးနာရီ! ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်သကဲ့သို့ငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်မတော်တဆမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်လက်ပ်တော့အပေါ်ကို Windows ကို install မကြာခဏ (မလိုအပ်သောဖြည့်စွက်, ပရိုဂရမ်နှင့်အတူ) ဆိုးဆိုးရွားရွားဘရိတ်တွေ့ကြုံတတ်၏။ Plus အား, ထို disk ကိုအလွန်အဆင်ပြေသည်မဟုတ် - (backup လုပ်အောက်တွင်အခြား "သေးငယ်တဲ့" မှလွဲ. ) OS ကို Windows ရဲ့တစ်ခုတည်းသော partition ကို။
Laptop ကိုဖြည့်, etc လက်ဖက်ရည်, ရေ, ဆိုဒါ, ဘီယာ, ငါသည်အဘယ်သို့ပြုသင့်တယ်ယိုဖိတ်။
မင်္ဂလာပါ အမှားလက်ပ်တော့ (netbook များ) ၏အများဆုံးမကြာခဏအကြောင်းတရားများတစ်ခုမှာကက်ဘိနက်အပေါ်ဖိတ်စင်နေတဲ့အရည်ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာမကြာခဏကိရိယာ၏အမှု၌စကားမစပ်စတာတွေအရည်ထိုးဖောက်မှု :. လက်ဖက်ရည်, ရေ, ဆိုဒါ, ဘီယာ, ကော်ဖီ, ကိုအောက်ပါ, စာရင်းဇယားအရသိရသည်တိုင်း 200th ခွက်ကို (သို့မဟုတ်ဖန်), လက်ပ်တော့အပေါ် Beige - ပေါ်ဖိတ်စင်နေပါသည်!
ကစားနေစဉ် Laptop ကိုပိတ်ပစ်
အဆိုပါပြဿနာကိုကစား Laptop ကိုအသုံးပြုသူများသည်တို့တွင်အသုံးအများဆုံးတဦးသည်မှတ်စုစာအုပ်ဂိမ်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်အခြားတောင်းဆိုတာဝန်များကိုအတွက်ပိတ်ထားကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်နေစဉ် Laptop ကိုပိတ်ပစ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အပိတ်ပန်ကာဆူညံသံ "ဘရိတ်" may တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ Laptop ကိုအပူအားဖြင့်ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။
2015 အကောင်းဆုံး Laptop တစ်လုံး
ယင်းအစဉ်အလာကိုဆက်လက်, ဤအချိန်ငါ 2015 ခုနှစ်တွင်လက်ပ်တော့များဝယ်ယူဘို့အကြှနျုပျ၏အမြင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြောင်းကိုရေးဖို့ပါလိမ့်မယ်။ စျေးနှုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ပ်တော့၏ရှိသမျှသည်အများသောသာမန်နိုင်ငံသားများမှလက်ခံနိုင်ဖွယ်ထက်ကျော်လွန်ကြောင်း, သူတို့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှတ်စုစာအုပ်အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်: ပထမဦးဆုံး - ကွဲပြားခြားနားသော application များအတွက် (ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်ကဲ့သို့) ဧကန်အမှန်ကိုအကောင်းဆုံး: စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. မပါဘဲနေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်း, ဂိမ်း, မိုဘိုင်းစက်, ။
လက်တွေ့ကျတဲ့အကွံဉာဏျ: Laptop ကိုဘက်ထရီ၏ဘဝတိုးချဲ့ဖို့ကိုဘယ်လို
Laptop ကိုဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူ laptop ကိုကွန်ပျူတာ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝထက်အများကြီးလျော့နည်းဖြစ်သောစားသုံးသူများ,2နှစ်ပျမ်းမျှဝန်ဆောင်မှုဘဝ (300 800 မှတာဝန်ခံ / ဥတုသံသရာ), မှနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ဘယ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်၎င်း၏ service ကိုအသက်, ရှည်အောင်မှတတ်နိုင်သမျှဘက်ထရီအသက်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ငါတိုင်းလက်ပ်တော့အသုံးပြုသူများ device ကိုရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒမပါဘဲမတရားဖမ်းဆီးအဆက်ပြတ်နေသည်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေကြုံတွေ့ထင်ပါတယ်။ အများစုကတော့, ဒီအကြောင်းမှာဘက်ထရီသောရွာဆိုတဲ့အချက်ကို၏ဖြစ်ပျက်, နှင့်သင်တာဝန်ခံပေါ်မှာမထားကြဘူး။ စကားမစပ်, ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ငါမဆိုဂိမ်းကစားသောအခါငါနှင့်အတူပါ ရှိ. , ပဲဘက်ထရီအနိမ့်အပြေးသောစနစ်အားသတိပေးမြင်ကြပြီမဟုတ်။
အိမ်တွင်မြေမှုန့်ထဲက laptop ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မင်္ဂလာပါ သင်ဘယ်လိုအိမ်တော်၌ရှိသည်မယ်လို့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အချိန်နှင့်အတူ, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, သန့်ရှင်းမဟုတ်ခဲ့ (laptop ကိုထည့်သွင်း) ဖုန်မှုန့်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုစုဆောင်း။ အခြိနျမှနျမှအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် - စင်ကြယ်ဖြစ်ရပါမည်။ အထူးသဖြင့် Laptop တစ်လုံးဆူညံဖြစ်လာသည်လျှင်, အာရုံစိုက်နွေး, ကို turn off, ဒါပေါ်တွင် "နှောင့်နှေး" နှင့်ထွက်ဆွဲထားခြင်းနှင့်သင့်ပါတယ်။
စသည်တို့ကိုသင့်ရဲ့တက်ဘလက်, smart ဖုန်း, ကွန်ပြူတာရန်သင့် laptop ထံမှက Wi-Fi ကိုဖြန့်ဝေဖို့ကိုဘယ်လို
နေ့သည်ကောင်းသော။ မဆိုခေတ်မီလက်ပ်တော့ကွန်ရက်များက Wi-Fi ချိတ်ဆက်, ဒါပေမယ့်လည်းသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်တစ်ခုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုတဲ့ router ကိုအစားထိုးနိုင်နိုင်ပါတယ်မသာ, သဘာဝကျကျအခြား devices များ (လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာများ, တက်ဘလက်, တယ်လီဖုန်း, စမတ်ဖုန်းများ) ကိုထူထောင်သည် Wi-Fi ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်. နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ဖိုင်တွေမျှဝေနိုင်ပါသည်။
ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးလက်တော့ပ် 2018
မှတ်စုစာအုပ် - တစ်လောကလုံး device ကို Ergonomics နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်။ laptops ဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်လာကြပါပြီမတော်တဆမဟုတ်ပါ: ရွေ့လျားမှုအတွက်အမြဲတမ်းခေတ်မီအချင်းလူသား, ဒါကြောင့်ဒီအသုံးမိုဘိုင်း gadget ကလေ့လာမှုနှင့်အပန်းဖြေပေါ်တွင်အလုပ်အတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ 2018 ခုနှစ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး devices များဖြစ်ခဲ့ကြပြီး 2019 ခုနှစ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုထိပ်တန်းတစ်ဆယ်လက်ပ်တော့မိတ်ဆက်ခြင်း။
မင်္ဂလာပါ လက်ပ်တော့မျှမျှတတဘုံပြဿနာတွင် - မျက်နှာပြင်တောက်ပ၏ပြဿနာတစ်ခု: ကမပြုပြင်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အပြောင်းအလဲအလုံးစုံလည်းတောက်ပခြင်း, အဆင်းအရောင်လည်းအားနည်းဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပဲ "အနာဘာသာရပ်" ။ ဤဆောင်းပါး၌ငါတဦးတည်းပြဿနာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်: ကအရောင်ကိုထိန်းညှိဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အကောင်းဆုံး Gaming Laptop ကို 2013 ခုနှစ်
မနေ့ကငါနဲ့အခြားမော်ဒယ်များအကြားဖော်ပြခဲ့တဲ့ထားပြီးဘယ်မှာ, 2013 ရဲ့အကောင်းဆုံး Laptop တွေတစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Laptop ကိုရေးသားခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကိုယ့်ဂိမ်းမှတ်စုစာအုပ်၏ခေါင်းစဉ်အပြည့်အဝထုတ်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေနှင့် add ဖို့တစ်ခုခုရှိကွောငျးယုံကြည်ပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းပေါ်လာနှငျ့ "ဂိမ်းမှတ်စုစာအုပ်" အမျိုးအစားထဲမှာအငြင်းပွားဖွယ်မရှိခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရန်အလွန်များပါတယ်သင့်သောသငျသညျယနေ့ဝယ်နိုင်သောသူတို့လက်ပ်တော့, ဒါပေမယ့်အခြားမော်ဒယ်မသာဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။
မြင့်မားသောအပူလက်ပ်တော့၏အကြောင်းတရားများစက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု microarray သို့မဟုတ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအကြားဖြန့်ဖြူးအတွင်းပိုင်းလက်ပ်တော့စက်ပစ္စည်းအတွက်တာဝန်ရှိ software ကိုအဆုံးသတ်ရေးအတွက်အအေးစနစ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကနေအထိအလွန်ကွဲပြားခြားနားနေပေမည်။ အကျိုးဆက်များကိုလည်းအသုံးအများဆုံးတဦးကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ် - ကစားနေစဉ် Laptop ကိုပိတ်ပစ်။
https://termotools.com my.termotools.com © မှတ်ချက်စာအုပ် 2019